Huawei Mate X ọzọ na-egbu oge ịmalite ya | Gam akporosis
Huawei Mate X na-egbu oge ọzọ
Na June nke afọ a ka ihe anyị tụrụ egwu izu gara aga gosipụtara, Huawei Mate X ga-egbu oge mbido ya. Mgbachi US na ọchịchọ ịkwalite ekwentị mere onye nrụpụta China mere mkpebi a. Kemgbe ahụ, e nwere ọtụtụ asịrị banyere ụbọchị mmalite nke ekwentị mbụ na-emegharị emegharị nke akara ndị China. Ihe nke ka emeghi eme.
Ekwuru ya na ngwaọrụ a ga-erute ụlọ ahịa na Septemba afọ a. Karịsịa mgbe a mara ọkwa mgbanwe ndị a rụburu. O di nwute, odi ka anyi aghaghi ime ya chere ihe ịmara nke a Huawei Mate X. Mbupute ya egbuola oge ọzọ.
Nkebi ya ekwesịghị iju anya, n'ihi na ọ pụtara na nso nso a ekwentị adịghị njikere. Yabụ na Septemba nke afọ a agaghị enwe mmalite dị otú ahụ. Ugbu a na-ekwu maka novemba dị ka ụbọchị mmalite nke Huawei Mate X. Ọ bụ ezie na enweghị nkwenye n'oge ahụ.
Maka ugbu a enweghị nkọwa e nyere na ihe kpatara nke a ọhụrụ na-egbu oge. Ebe ọ bụ na o yiri ka ekwentị agbanweela mgbanwe ndị dị mkpa. Agbanyeghị n’izu ụka ole na ole gara aga ha kwuru na ha chọrọ ime nyocha ndị ọzọ, iji hụ na ha na-eguzogide. O nwere ike ịbụ ihe kpatara ya.
Otu osila dị, anyị ga-eme ya chere ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ ọzọ ịzụta nke a Huawei Mate X. Akara ndị China anaghị ekwu ihe ọ bụla hoo haa banyere nsogbu na ngwaọrụ a, yabụ na anyị amaghị ma enwere nsogbu ọ bụla ọzọ na-egbochi ịmalite ya.
O doro anya bụ igba egbe nke ọtụtụ na-atụ anya ya, dị ka nke dị na Galaxy Fold. Mana ruo ugbu a, ọbụlagodi tupu ha abanye n'ahịa, ekwentị abụọ a na-abaghị uru na-abanye n'ọtụtụ nsogbu. Anyị na-atụ anya inwe nkọwa zuru ezu banyere mwepụta nke Huawei Mate X n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Mate X na-egbu oge ọzọ
Trópico ga-ebido gam akporo na September 5
Motorola One Action nwere ụbọchị ngosi